१७ बर्षमा मुस्किलले ११ किलोमिटर कालोपत्र भएको जिल्ला ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक १७ बर्षमा मुस्किलले ११ किलोमिटर कालोपत्र भएको जिल्ला !
१७ बर्षमा मुस्किलले ११ किलोमिटर कालोपत्र भएको जिल्ला !
२०७७, १८ आश्विन आईतवार २०:१६
एक महिना यता म्याग्दीमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको गतिविधिका तस्वीरले सामाजिक सञ्जाल पोतिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन करिब दुई बर्ष बाँकी रहदाँ दलको प्रतिस्पर्धा निर्वाचन नजिक भएको महसुस हुन्छ।
राजनीतिक दलले आफ्नो पकट बलियो बनाउन दौडधुप जस्तै विकास निर्माणमा भने विगत दुई दशक यता म्याग्दीका जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको गति लिन सकेन । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार आसपासका क्षेत्रमा १७ बर्षमा मुस्किलले ११ किलोमिटर सडक समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन्।
तत्कालिन माओवादी जनयूद्धको क्रममा ग्रामिण क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्ने सहज वातावरण नभएको भन्दै बि.श २०६० सालमा सदरमुकाम बेनीबजारमा कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे गरियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बेनी नगरपालिकाले टालटुले मर्मत मात्रै गर्यो। बजारभित्रकै कालोपत्र उप्किएको अवस्था मर्मत समेत भएन् ।
छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतका ग्रामिण सडक समेत धमाधम कालोपत्र हुदाँ म्याग्दीमा सदरमुकाम बााहिर बेनी–गलेश्वर र रत्नेचौर– बेनी खण्ड मात्रै कालोपत्रे भएको छ। कालोपत्रे गरिएको सडकको दुरी करिब ११ किलोमिटर भएपनि धेरै ठाउँमा अलपत्र छोडिएको छ ।
राजनीतिक दल बिच पार्टीगत गतिविधिमा निकै तिब्र प्रतिस्पर्धा भएपनि विकास निर्माणमा साविकको धौलागिरी अञ्चलका चार जिल्लामा मुस्ताङभन्दा पनि म्याग्दी पछाडी नै छ। सामारिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको मुस्ताङ बाहेक पर्वत र बागलुङको तुलनामा विकास निर्माणमा निकै पछाडी परेको छ ।
२०४६ साल यता सांसद हुदैं संघीय र प्रदेश सरकारमा फुल मन्त्रीको अवसर पाउँदा समेत विकास निर्माणमा म्याग्दीले फड्को मार्न सकेको छैन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रमा पुगेका नेताहरुको शक्तीमा रहेकासँग पहुँचको अभावले नै विकासमा आवश्यक बजेट भित्रिन नसकेको गुनासो म्याग्देलीको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतमा विकासे बजेटको ताँती लाग्दा सोही निर्वाचिन क्षेत्र भएको म्याग्दीमा १७ बर्ष अगाडीको कालोपत्रे सडकमै सिमित हुनुपर्ने अवस्थाले संघीय सरकारको बजेटको नजिक म्याग्दीका नेताको पहुँच नभएको कालोपत्रे सडकले मसेत देखाउँछ।
कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै रोकिएको बेनी–रत्नेचौर सडकखण्डमाकालोपत्र गर्नुअघि बिच्छ्याइएको रोडा र ढुङ्गा समेत बाढीपहिरोले असर गरेको छ । संघीय सरकारमा म्याग्दीका नेताहरुको पहुँचको अनुमान गर्ने बेलामा विकासको गति भने झन् सुस्ताउँदै गएको छ ।
बेनी–जोमसोम– कोरला सडक, पश्चिम म्याग्दीको भविस्यसँग जोडिएको बेनी–दरबाङ सडकको काम काम सुस्ताएको छ ।बेनी अस्पतालको ५० सैया बेड भएको भवन लगायत अन्य विकास निर्माणमा विभिन्न वाहानामा ओझेलमा परेको छ ।
दर्जनौ विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् । नीति निर्माणकै तहमा प्रतिनिधित्व भए पनि विकासका लागि कसैले पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण म्याग्दी विकास निर्माणमा पछाडी परेको हो। संघीयता आउनुभन्दा पहिला निर्माण भएका, हाल निर्माण भएका सबै सडक अझै धुलाम्मे छन्।
तत्कालिन नेकपा एमाले हुदै नेकपा र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदबाट म्याग्दीमा नियमित बजेट बाहेक पहुँचको आधारमा बजेट ल्याउनै सकेनन् । प्रतिनिधिसभामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वत र म्याग्दीमा भित्रिएका विकासे योजनाहरुको तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
Previous articleनिगरानीको क्षेत्र कारागार हो : आयोगका सदस्य पाठक
Next articleफगामी मृत्यु प्रकरण ! मलेसियन प्रहरीले कोठा सिल गरी अनुसन्धान सुरु